နောက်ဖေးလမ်းကြား ရေမြောင်းမရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် မိလ္လာစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အိုဆ? - Yangon Media Group
နောက်ဖေးလမ်းကြား ရေမြောင်းမရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် မိလ္လာစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အိုဆ?
နောက် ဖေးလမ်းကြောင်း ရေမြောင်းမရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် မိလ္လာသန့် စင်စနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အိုဆာကာမြို့ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ နည်းနာကိုလေ့လာ နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦး မောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုး၏ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးမှ မိလ္လာရေပုပ်စုပ်စနစ် Treatment (Up-Flow System) ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီး အိမ်ရှေ့၊ အိမ်နောက် ရေမြောင်းများမရှိသည့်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များတွင် အခြားစနစ်တစ်ခုဖြင့် ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ဖြေကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာမြို့သည်လည်း တစ်ချိန်က မိလ္လာသန့် စင်စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ နိုင်ငံကဲ့သို့ ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်ကို လေ့လာသိရှိရသည်ဟု ရန် ကုန်မြို့တော်ဝန်က ပြောသည်။ ”နောက်ဖေးလမ်းကြား ရေ မြောင်းမရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာ နေ ရာအပေါ်မူတည်ပြီး မိလ္လာသန့်စင် စနစ် ပိုကောင်းတဲ့စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ခေါ်ထားပါတယ်။ စ နစ်ကို ပြန်လေ့လာနေပါတယ်။ အဓိက ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ စနစ်ကနောက်ဖေး လမ်းကြားမ လွတ် ကင်းတဲ့နေရာကို အိုဆာကာ မှာရှိတဲ့သူတို့ မြူနီစီပယ်ရဲ့ ပါမစ် System အရ ကျွန်တော်တို့ လေ့ လာနေပါတယ်။ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီထက် ကောင်းတဲ့စနစ်တွေကို တင်ပြလာ မယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြီး ခွင့်ပြုသွားနိုင်ရင်လည်း ခွင့်ပြု ပါမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
နောက်ဖေးလမ်းကြား မရှိ သည့်အပြင် အဓိကမြောင်းမကြီး များနှင့်ပါ ဆက်သွယ်မှုမရှိသော နေရာများတွင် Treatment (Up-Flow System)ကိုအသုံးပြုမရ ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးက ပြောသည်။ ”အချို့သော ရပ်ကွက်တွေမှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားမရှိဘူး။ နောက်ဖေးက စွန့်ထုတ်တဲ့ရေတွေ အိမ်ရှေ့မြောင်းကို ပိုက်သွယ်ပြီး စွန့်ထုတ်ကြတယ်။ ကလိုရင်းထည့် မှုပေါ့လျော့ခြင်း၊ အိမ်ရှေ့မြောင်း ရေစီးမကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် အ နံ့အသက်ဆိုးတွေက ပြည်သူရှူမိ တော့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့ အ ခြေအနေကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဒီစနစ်က မသင့်လျော်တဲ့ရပ်ကွက် တွေမှာအခြားစနစ်တစ်ခုနဲ့ အစား ထိုးဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ် ခြင်းကိုအိမ်နောက်ဖေးသို့သာ စွန့် ထုတ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါပြသနာများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ နောက်ဖေးလမ်းကြား မချန်ဘဲ မြေဧရိယာအကုန် နေအိမ်များ ဆောက်လုပ်မှုများ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး Treatment (Up-Flow System) ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဘက်တီးရီးယားမွေးကာ အနံ့သတ်သည့်စနစ်မှာ စနစ်မကျပါက လူကို ပြန်လည်ဒုက္ခပေးနိုင် သည့်အတွက် ပြန်လည်စဉ်းစား နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးကပြောသည်။ ယခင်ကမိလ္လာကန်ကို နှစ် ကန်သုံးစွဲပြီး ရေကြည်ကန်မှတစ် ဆင့် မြေကြီးထဲသို့စိမ့်ဝင်သည့်စနစ်မှ ယခုအခါမိလ္လာရေပုပ်စုပ်စနစ် Treatment (Up-Flow System) ဖြစ်သောကန်လေးဆင့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲလာကြောင်း သိရသည်။
မိလ္လာရေပုပ်စုပ်စနစ် Treatment (Up-Flow System) သည် ဒုတိယကန်တွင်ဘက်တီးရီးယားပိုးကိုမွေးပြီး အနည်ထိုင်ပါက တတိယကန်တွင် ကလိုရင်းထည့်ကာ သုံးစွဲရာအရည်ကြည်ကန်မှာ စတုတ္ထကန်မှတစ်ဆင့် မော်တာအကူအညီဖြင့် နောက်ဖေးမြောင်း ထဲသို့စွန့်ထုတ်သည့်စနစ်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာ Blue Moon အထည်ချုပ်စက်ရုံရှေ့ ဇန်နဝါရီလ လုပ်ခလစာရရှိရေး လုပ်သားများ တောင်းဆိုနေ
ရခိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းခဲ့ဟုဆို
ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ် တစ်စီး လမ်းချော်ပြီး နေအိမ်ကို ဝင်တိုက်၊ ခရီးသည်များကို ခက်ခဲစွာ ထု?
The Voice Myanmar ကနေပြီးတော့ အမိုက်စားတွေ ထွက်လာနိုင်အောင်လို့ ကြိုးစားသွားမယ်’ ရန်ရန်ချန်း